को बन्ला बिद्यामन्दिर माध्यमिक बिद्यालयको प्रधानाध्यापक ? बागलुङ नगरपालिकाको कुटिल चालले बिद्यार्थीहरुले लेखा विषय पढ्न पाएनन् ! – ebaglung.com
को बन्ला बिद्यामन्दिर माध्यमिक बिद्यालयको प्रधानाध्यापक ? बागलुङ नगरपालिकाको कुटिल चालले बिद्यार्थीहरुले लेखा विषय पढ्न पाएनन् !
२०७५ असार २९, शुक्रबार १५:३५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७५ असार २९ । यस जिल्लाको मात्र नभै यस क्षत्रकै पहिलो बिद्यालयका रुपमा चिनिने बिद्यामन्दिर माध्यमिक बिद्यालयको प्रधानाध्यापकको लागि चलखेल सुरु भएको छ । हालका प्रधानाध्यापक जगन्नाथ आचार्यको उमेरका हदले आगामी २०७६ सालको बैशाखमा पदावधि सकिने भएकाले यस पदका लागि आँखा गाड्ने र आफ्नालाई बनाउनेहरुको दौडधूप देखिएको हो ।
बिद्यामन्दिर माध्यमिक बिद्यालयमा कक्षा १ देखी १० र उच्चमावि तहको विज्ञान लगायत विभिन्न संकायका कक्षा ११ र १२ सन्चालन भैरहेका छन् । आगामी साउन १ गते देखी कक्षा ११ र १२ को अध्यापन तथा व्यवस्थान समेत बिद्यामन्दिर माबि बाटै हुने नयाँ नीति अनुसार प्रधानाध्यापक पद प्रति अझ बढी चासो देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु मध्य बरिण्ठताको आधारमा प्रअ नियुक्ती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण हाल बिद्यामन्दिर माध्यमिक बिद्यालयमा मौजुद रहेका शिक्षकहरु मध्य गणित र शिक्षा विषयका शिक्षक शान्तमणि ढकाल बरिष्ठतामा अघि रहेका छन् । आगामी १० महिनामा उनी भन्दा बरिष्ठतम शिक्षक कतैबाट सरुवा भै वा गराई नआएको खण्डमा ढकाल नै प्रधानाध्यापक हुने पक्कै भएको विद्यालय श्रोत भन्छ ।
‘तृतीय तहका ढकाल सर, गोर्खा निवासी हुन र माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका शिक्षकको रुपमा चिनिन्छन्…’ बिद्यामन्दिरका एक जना शिक्षकले यस हरफकारलाई बताए ।
उता बिद्यामन्दिरमा लेखा विषयका शिक्षक लामो समय देखी रिक्त रहेको छ । बिद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित बनेको छ । सो रिक्त पदमा अर्घाखाँचीबाट सरुवा भएर आउन पर्वत मुडिकुवाका प्रकाश लम्सालले अर्घाखाँचीको बिद्यालयबाट सरुवा अनुमती लिएर बिद्यामन्दिरमा पेश गरेका छन् । तर बागलुङ नगरपालिकाले सरुवाको स्वीकृति नदिएर आलटाल गरिरहेको आरोप विद्यामन्दिरको छ । रिक्त रहेको लेखा विषयको शिक्षक पदमा बागलुङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा हेर्ने राङखानी माबिका शिक्षक धविमावि केन्द्रका श्रोत व्यक्ति ढकबहादुर पुनलाई बिद्यामन्दिरमा लैजाने भित्री दाउमा एमालेबृत्त कस्सिएको श्रोतको दाबी छ । पुन अँग्रेजी विषयका व्दितिय तहका शिक्षक हुन् ।
बिद्यामन्दिरमा अँग्रेजी विषयमा एमएड र एमए बीएड गरेका दुई जना शिक्षक मुकुन्द पौडेल र राजेश शर्मा मौजुद रहेका छन् । लेखा शिक्षकको पद खाली छ, दुईदुई जना अँग्रेजी विषयका शिक्षक रहँदा रहँदै रिक्त लेखा विषयको शिक्षक सरुवा हुन नदिएर उहि अँग्रेजी विषयका शिक्षक श्रोत व्यक्ति पुनलाई बिद्यामन्दिर लैजाने चलखेलको पछी एमाले माओवादी बीचको ‘ढुसी’को रुपमा हेरिएको छ ।
यस चलखेल भित्र स्थानीय व्यक्तिका साथै विद्यामन्दिर जस्तो प्रतिष्ठित विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा व्दितीय या प्रथम तहको व्यक्ति चाहिने तर्कले पनि काम गरेको श्रोतले भन्यो । समाचार श्रोतका अनुसार अर्कोतिर माओवादी ह्याङ ओभरबाट बाहिर निस्की नसकेकाहरु श्रोत व्यक्ति पुनलाई विद्यामन्दिरमा सरुवा हुन नदिन भरमग्दूर प्रयासमा छन् ।
बिद्यालय व्यवस्थापन समिति भने नगरपालिकाको कुटिल चालले विद्यार्थीहरुको पठन पाठन प्रभावित बनेकोमा चिन्तित देखिन्छ ।
तस्वीर- कुसुम थिङ ।
तत्काल सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नगर प्रमुख समक्ष अनुरोध ! नगरपालिका भित्रको आर्थिक अनियमितता बिरुद्ध भण्डाफोर गर्दै काँग्रेस जनता समक्ष जाने !
धुल्लु लुरुङका पहिरो पीडितलाई नेकपा बागलुङद्वारा राहत रकम प्रदान